Ma qaadataa qoraallo oo ma doonaysaa inaad hesho jidkaaga? Miyaad ku shaqeysaa xisaabinta kombayutarka natiijadaaduna way isbedeshaa maalinba maalinta ka dambeysa? Ma jeclaan lahayd inaad la wadaagto falanqayntaada xogta iyo shaqadaadii ugu dambeysay asxaabtaada si ay dib ugu isticmaali karaan?
MOOC kani adigaa leh ardayda doctoral, cilmi baare , ardayda Masterka, macalimiin, injineerada Dhammaan qaybaha kuwaas oo doonaya inay ku tababaraan bay'ada daabacaadda iyo qalabyada lagu kalsoonaan karo:
Markdown qaadashada qoraal habaysan
oo ka mid ah Qalabka tusmaynta (DocFetcher iyo ExifTool)
Gitlab raadraaca nooca iyo shaqada iskaashiga
Notebooks (jupyter, rstudio ama org-mode) si si hufan loo isku daro xisaabinta, matalaadda iyo falanqaynta xogta
Waxaad baran doontaa inta lagu jiro leyliga iyadoo lagu saleynayo kiisas la taaban karo sida loo isticmaalo qalabkan si aad u horumariso qoraal qaadashadaada, maareynta xogtaada iyo xisaabintaada. Tan, waxaad yeelan doontaameel Gitlab ah iyomeel Jupyter ah, oo lagu dhex daray madal FUN oo aan u baahnayn wax rakibid ah. Kuwa doonaya waxay la qabsan karaan shaqada dhabta ah Studio ou Qaabka Org ka dib markii qalabkan lagu rakibo mishiinkooda. Dhammaan hababka rakibidda iyo habaynta qalabka waxaa lagu bixiyaa Mooc, iyo sidoo kale casharro badan.
Waxaan sidoo kale kuu soo bandhigi doonaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka cilmi-baarista la soo saari karo.
Dhamaadka MOOC-gan, waxaad yeelan doontaa farsamooyinka kuu oggolaanaya inaad diyaariso dukumeenti xisaabeed la soo celin karo iyo inaad si hufan u wadaagto natiijooyinka shaqadaada.
🆕 Wax badan ayaa lagu daray casharkan:
fiidiyowyada git / Gitlab ee bilowga ah,
dulmar taariikhi ah oo ku saabsan cilmi-baarista dib loo soo saari karo,
soo koobid iyo markhaatiyo baahiyaha gaarka ah ee dhinacyada cilmiga aadanaha iyo bulshada.
READ Meeshee Francophonie ka degtaa adduunka sanadka 2021?
Cilmi-baaris dib loo soo saari karo: mabaadi'da hab-raac ee sayniska hufan Diisambar 18, 2021Tranquillus
horeSirdoonka macmal ah… oo leh sirdoon!
socdaTababarka wax lagu baro tacliinta sare